အမိမြေသို့ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း: ဘုရင်မပါတဲ့..စစ်တုရင်ပွဲ
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 12:22 PM
chess ကစားရာမှာ queen ရဲ့ value က 10 ပါ။ကျန်တဲ့အရုပ်တွေ ထက်တန်ဖိုးမြင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ် king ရဲ့ value က infinite လေ။ ဒီတော့ဘယ် လိုမှယှဉ် မရတာပဲ Ma Thadar ရယ်။...ဟဲ..ဟဲ
ပွဲစပြီ လား ခင်ဗျာ ၊ မတတ်ကျွမ်းသော ပရိသတ် တစ်ဦးပါ ။
သြော်.... တန်ဖိုးမှမတူတာကို...။ ဒါပေမဲ့ ဘုရင်ကြီးမရှိတော့ရင်တော့ ဆက်ကစားလို့မရတော့ဘူးနော်...။ ရှုံးသွားပြီလေ...။
Pls share more than like this...
If the King is talented ,dose the queen need him????
မသဒ္ဓါရေ မလို ဘ၀ကဗျာတွေရေးတတ်ဘူး အချစ်ကဗျာပဲရေးတတ်တယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ပြီးတော့ ဘယ်သူတွေဘာပြောပြော စစ်တုရင်ပွဲထဲက..ဘုရင်မ..လုပ်ချင်လို့
ကျွန်တော် ကိုကဒေါင်းစီမှာတင်မရလို့ဒီမှာ လာတင်တာပါ
ကျွန်တော်ရေးတာ ဖျက်ပြစ်ချင်လဲ ဖျက်ပြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဒီမှာ ကွန်ပျူကျောင်းတက်နေပါတယ်။ အတိအကျပြောရရင် Linux ပိုင်းပါ။ ကို ကဒေါင်း ကို ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်။ သီအိုရီအရ Hack ကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မကာကွယ်နိုင်ပါဘူး။ အမေရိကန် အိမ်ဖြူတော် ကွန်ပျူတာ Hack လုပ်ခံရတာ အစ်ကို ကြားမိမှာပါ။ နောက်တစ်ခုကတော့ MYSQL server ကို security လုပ်ရင်း အဆင်မပြေရင် ဘယ်လို ဖြစ်တတ်လဲဆိုတာ ကိုကဒေါင်းသိထားမယ်ဆိုရင် အခုလို ကောက်ချက်ချမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အစ်ကိုတို့ အစ်မတို့ ဒီမှာ အားမနာတမ်း teashop အတင်း ၀ိုင်းပြောနေတာ တော့ စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ။ အစ်ကိုတို့ ကြော်ငြာတွေကို တင်ပေးတာတွေ၊ အစ်ကိုတို့ပြောချင်တာတွေ ဆင်ဆာ မပါပဲ လွပ်လွပ်လပ်လပ် ပြောခွင့်ပေးတာတွေ ကို မေ့နေလို့လား။ တခြားနေရာတွေမှာ အစ်ကိုတို့ကို အဲလို လုပ်ပေးတာရှိလို့လား။ အစ်ကို တို့ ဒီမိုကရေစီ သမားတွေလုပ်တဲ့ နေရာမှာ အဲလို လွတ်လပ်လို့လား။ စေတနာနဲ့ လုပ်ပေးထားတာကို အပြစ်ပြောတော့ လွယ်လွယ်လေးနဲ့ပြောပြစ်တယ်။ အစ်ကိုတို့ အချင်းချင်း မျက်နှာပြရဲ သေးလားဗျာ။
အစ်ကိုတို့ လဲ ယူဆချက် ပြောတာပဲ။ အစ်ကို မောင်ဆန်လဲ ယူဆချက်ပြောတာပဲ။ အစ်ကိုတို့ ပြောရင် အထောက်အထားပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျိုးကြောင်းဆက်စပ်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘာများရှိလဲ။ အဲလို ယှဉ်မပြောနိုင်လို့ teashop လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောတာကို အစ်ကိုတို့ စိတ် ထဲ မကျေနပ်ဖြစ်နေတယ် မဟုတ်လားဗျာ။
ကိုမောင်ဆန် မလေးရှားက လူကို ကူညီသွားတယ်။ ပညာရေးတိုးတက်ဖို့အတွက် ပေါင်းလုပ်ဖို့ စည်းရုံးသေးတယ်။ အစ်ကိုတို့ ဘာများလုပ်သလဲ။ အခုလိုပဲ ၀ိုင်းဖွဲ့ပြီး အရေမရ အဖတ်မရ အချိန်ဖြုံန်းနေတာပဲ မဟုတ်လား။
အစ်ကိုတို့ အခုပြောထားတာတွေကို ကျွန်တောလဲ Yahoo Group မှာတင်လိုက်ပါမယ်။ Teashop ကြောငြာ တင်တဲ့ နေရာမှာပါ။ Teashop လဲ အစ်ကို တို့အားလုံးရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ စိတ်ဓါတ်လေးတွေ သိသွားအောင်လို့ပါ။
ကျွန်တော် ကတော့ အစ်ကို မောင်ဆန် နေတဲ့ မြို့သွားပြီး သူ့ကို ရအောင်ရှာမယ်။ သူနဲ့တွေ့ရင် သူ့ကို Forum ထောင် ဖို့ အကြံပေးမယ်။ ငွေရော လူအင်အားပါ အကူအညီပေးမယ်။ မရ ရအောင်ရှာမယ်။ သူရဲ့ အတွေးအခေါ်ကို ကျွန်တော် လေးစားတယ်။ အစ်ကို ကဒေါင်းလို ဗမာကို အခွင့်ရတရွေ့ နှိမ်တာမျိုးတော့ ကျွန်တော် ရွံတယ်ဗျာ။ အစ်ကို တရုပ်မိုလို့ အဲလို လုပ်တာလား။ တရုပ် ဆိုးတာတွေ အများကြီး ရှိတာပဲ အစ်ကို ဘာဖြစ်လို့ မပြောလဲ။ ကျွန်တော် ဗမာစစ်စစ်ပါ။ အခု အစ်ကို မောင်ဆန်ကို ရအောင်ရှာပြီး Forum အသစ်လုပ်မယ် ။ အစ်ကို တို့ အဲဒီမှာ ယှဉ်မပြောရဲရင် အခုလိုပဲ ဘေးထွက်နေပါ။ အစ်ကို မောင်ဆန် ရေးတာကို တလုံးချင်း ကျွန်တော်နဲ့ တခြားလူတွေ ဖတ်သွားမယ်။